Evergreen Phyo: July 2009
တဖြည်းဖြည်း လျှောက်ရင်းနှင့်ပင် မောဟိုက်လာတာကြောင့် ခဏရပ်လို့နားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည် ။ နောက်ဆုံးအချိန် နီးသည်တော့မှ ကံကောင်းသည်လို့ပြောရမလား.... ခပ်လမ်းလမ်းက သစ်ပင်အောက်မှာ လူတစ်ယောက်ထိုင်စာကျောက်တုံးတစ်တုံးကို တွေ့သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်း အထိုးအကြိတ် ၊ အရိုက်အနှက် ခံရထားသော ဒဏ်တွေကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲလို့နေသည်...ကြမ်းတမ်းသောလမ်းခရီးကြောင့်လည်း ပိုပင်ပန်းလို့နေသည်..။ လက်နှစ်ဘက်ကိုသာ ကြိုးတုပ်ထားလို့တော်တော့သည်... တစ်ကိုယ်လုံးကိုများ တုပ်ထားလိုက်ရင်ဖြင့် ဒီလောက်ဝေးဝေးကိုတောင် မရောက်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အသိဆုံးဖြစ်သည်..။ ရှေ့နှင့် ဘေးနှစ်ဘက်က လိုက်ပါလာသူတွေကိုကြည့်တော့ .. အနည်းငယ်တော့ ချွေးစို့နေပုံရသည်...။ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ခဏနားခွင့်ရဖို့တော့ တောင်းဆိုရမည်ဖြစ်သည်...။
“ဘာလဲ မင်းက အချိန်ဆွဲချင်လို့လား... ဒီလိုလာလုပ်လို့တော့မရဘူး..”
“သူ့ကို ကြည့်ရတာ တကယ်ပင်ပန်းနေပုံဘဲ .. ခဏလောက်ပေးနားလိုက်ပါ.. တော်ကြာလဲသွားမှဖြင့် ပိုကြန့်ကြာနေဦးမယ်..”
ခဏတာနားခွင့်ရတော့ အမောတွေပြေသွားသလို ခံစားရသည်...။ တသုန်သုန်တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေပြည်အေးလေးနဲ့ အရိပ်ပေးတဲ့သစ်ပင်လေး.. ကျောက်တုံးလေးရှိနေတာကိုပင် ကျေးဇူးတင်ရဦးမယ်..။ အဝေးက မှိုင်းညို့နေတဲ့ တောင်တန်းတွေနဲ့ သစ်တောတွေကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာ အလွမ်းတွေပြည့်လာသလို.....။ သာယာလှပသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပုဇွန်ဆီရောင်သမ်းသော နေရောင်အောက်မှာအရောင်တောက်နေသည်...။ တိမ်တိုက်တို့သည် အရောင်အသွေးစုံလင်စွာ ရွေ့မျောကြသည်..။ လေတိုက်ရင်းနှင့်ပင် လိပ်ပြာအဖြူရောင်လေးတစ်ကောင် ပါလာသည်... အနားရောက်တော့ ဝေ့၀ိုက်ပျံသန်းလို့နေသည်..။ တစ်ချိန်တည်းမှာ လိပ်ပြာလေးလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျံသန်းခွင့်ရချင်မိသည်...။
အနားမှာ ပါလာသူတွေတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ စကားပြောနေကြသည်...။ လိပ်ပြာလေးက သွားတော့မည်ဟု နှုတ်ဆက်သယောက် ပခုံးမှာလာနားပြီး အနောက်ဘက်သို့ပျံသွားသည်..။ လိပ်ပြာပျံသွားရာလိုက်ကြည့်ရင်း ခေါင်းလှည့်လိုက်တော့ ပခုံးရင်းကဒဏ်ရာက ဆစ်ကနဲ နာကျင်သွားသည်..။ ကြည်နူးနေသောစိတ်တို့သည်... တစ်မဟုတ်ချင်း ပျောက်ကွယ်သွားသည်..။ မကြာမီ အမှောင်ထုသည် တစထက်တစကြီးစိုးလာပေတော့မည်..။
“ဟေ့ သွားရအောင် တို့နေမ၀င်မီရောက်မှဖြစ်မှာ...”
လမ်းတစ်လျှောက်မြင်မြင်သမျှ အရာအားလုံးတို့သည်လွမ်းစရာ အတိဖြစ်နေသည်.... မရမ်းရောင်တိမ်တိုက်တွေ..၊ အိပ်တန်းပြန်ငှက်တွေ...။ ခံစားမှုတို့ပြည့်လျှံလာသော်လည်း စကားလုံးတို့သည် နှုတ်ခမ်းထက်တွင်သာ အသံမဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားသည်..။
“ကဲ ကိုယ်တို့လုပ်စရာရှိတာကိုတော့ လုပ်ရမှာပဲ... မပူပါနဲ့ အမြန်ဆုံးနဲ့ပြီးဆုံးသွားမှာပါ..”
အမြန်ဆုံးတဲ့..ဘယ်လောက်မြန်မြန်လဲ.. တစ်မိနစ်လား.. တစ်စက္ကန့်လား... အို..စက္ကန့်ဝက်တောင်မကြာအောင် မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်လုပ်ပေးပါ...ကျွန်တော်လူ့လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်လွန်းလို့ပါ.... ခုချက်ချင်းထွက်ခွာပါရစေ..။ ကျွန်တော့်မှာ အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်.. စွပ်စွဲခံရတယ်ဆိုတာ မွှေးပျံ့တဲ့ပန်းခင်းလေး.. စိမ်းမှောင်တဲ့တောအုပ်ကလေး.. အေးချမ်းတဲ့စမ်းချောင်းလေး.... အဖြူရောင်တိမ်တိုက်တွေ... အို..ကုန်ကုန်ရှိ တောတောင်ရေမြေအားလုံးသိတယ်......။ ကျွန်တော်ဖြူစင်ကြောင်း..... သူတို့ပြောကြတာကို သင့်နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ရင် တိုးတိုးကြားလိမ့်မယ်........။
မျက်လုံးတွေမှိတ်ထားလိုက်တော့...စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာသည်..... လေပြည်တို့ နားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးနေသည်..။ ကျွန်တော် ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီ...။ “ချောက်” ဟူသောအသံတစ်ချက်သာကြားပြီးနောက် ဘာဆိုဘာမှမကြားရတော့...။ ကျွန်တော် အေးချမ်းလွတ်လပ်မှုကိုခံစားရသည်.. အားလုံးပေါ့ပါးနေသည်............ ခဏအကြာ ဘာဆိုဘာမှမသိတော့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့.. ကျွန်တော်တကယ်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ..............။
p.s(နောက်တင်မည့်ပို့စ် - အစားအသောက်)
Posted by Phyo Evergreen at 6:39 PM2comments Links to this post
အရင်ပို့စ်တုန်းက မနွေးကအစားအသောက်မပါလို့ စိတ်ဆိုးသွားပြီဆိုလို့ ဒီတစ်ခါလည်း အရသာရှိတဲ့ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်လောက် တင်ချင်ပါ့..။ ဒီရက်ပိုင်း ရာသီဥတုပူပြီး ခေါင်းတွေလည်းကိုက်နေတယ်.. စားချင်စိတ်လည်းပျောက်နေတာကြာပြီ...။ အပြင်သွားလည်း ဘာစားရမှန်းမသိ ဆိုင်ရှေ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ လှည့်ပြန်တာလည်းများပြီ..။ ဒီနေ့အပြင်သွားရင်းနဲ့ Sambal Fish ဆိုတာစားဖြစ်တယ်...။ တော်ရုံတန်ရုံ ဒီလိုအစားအသောက်မျိုးမစားဖြစ်ဘူး.. ဒီနေ့မှ ထူးထူးဆန်းဆန်းစားချင်လာတာနဲ့ စားဖြစ်တယ်.. မဆိုးဘူး စားလို့ကောင်းတယ်..။
စင်္ကာပူမှာတော့ Sambal ဆိုပြီး ကြက် ၊ ငါး ၊ ပုဇွန် နဲ့ ပင်လယ်စာဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်..ဟင်းအနှစ်နဲ့ ချက်ထားတာမျိုးကိုခေါ်တာပါ..။ Sambal ဆိုတာမလေးစကားလို့ထင်ပါတယ်..။ ခါတိုင်း Sambal အမျိုးမျိူးတွေ့ဖူးပေမယ့် ကြိုက်မယ်မထင်လို့ မစားဖြစ်ခဲ့ဘူး...။ ဒီနေ့တွေ့တာကျတော့ ပုံမှာပြထားတာ ခါတိုင်းမြင်ဖူးတာနဲ့ မတူလို့ ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် စမ်းစားကြည့်မယ်ဆိုပြီး စားဖြစ်တာ..။ ဆိုင်က လုပ်ပေးတာကို စောင့်ကြည့်နေတော့ Breaded Fish ရယ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်ပါးပါးလှီးထားတာကို အပေါ်မှာ Mayo ဆမ်းပေးထားတာရယ် ၊ ထမင်းရယ်ပါပါတယ်..။ အရသာကောင်းပြီး ထမင်းပါတာများပါတယ်.. (ကျွန်တော်က ထမင်းများများစားရတာသဘောကျလို့ပါ..)။ ငါးကြော်အပေါ်မှာ Sambal အနှစ်ဆမ်းပေးပါတယ်... ကြက်သွန်နီ၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ငရုတ်သီး စတာတွေပါမယ်ထင်ပါတယ်..(အတွေ့အကြုံအရ..ဟီး).. မြန်မာဟင်းအနှစ်လို အရသာရှိရှိနဲ့ စားကောင်းပါတယ်..။ အရည်သောက်တော့ မပေးဘူး စားရတာနည်းနည်းတော့ နင်ပါတယ်.. အအေးလေးသောက်ရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ...။ စားခဲ့တာကတော့ Jurong West St51, Se7en Eleven ဆိုင်ဘေးက Food Court မှာပါ..။ စာဖတ်သူအားလုံး အရသာရှိရှိစားသောက်နိုင်ပါစေ.. :D ဘိုင်းဘိုင်..။
Posted by Phyo Evergreen at 1:04 AM6comments Links to this post
စာမေးပွဲပြီး ပြီးတော့ ဘလော့ပေါ်မရောက်တာရက်အတော်ကြာပေါ့...။ ဘလော့လည်းသိပ်မဖတ်ဖြစ် ပြီးတော့ ဘာမှလည်းမယ်မယ်ရရမလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..။ အာရုံမစိုက်နိုင်ဘူးဘဲဆိုပါတော့... စိတ်ကဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်..။ ပို့လေးတစ်ပုဒ်လောက် သေသေချာချာရေးမယ်လို့ကြံတော့ ဘာအကြောင်းရေးရမှန်းမသိ.. အဲသလိုဖြစ်နေတာလည်းကြာပါပြီ...။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒီရက်ပိုင်းအတွေ့အကြုံ အဖြစ်အပျက်လေး စိတ်ထဲရှိတာလေးတွေကိုဘဲ ပို့တစ်ပုဒ်အဖြစ်တင်ပါရစေ..။
စာမေးပွဲပြီးတော့လည်း မနားရ တနင်္လာနေ့ကျကျောင်းပြန်တက်ရပါတယ်...။ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တာနဲ့ လက်ချာတွေပြန်တက်..ကျူတိုရီရယ်တွေလုပ်နဲ့ စာများပါတယ်..။ ကြားထဲ အမြဲခေါင်းလာလာစားပေးတဲ့ မကုန်နိုင်တဲ့ပရောဂျက်တွေကလည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဘဲ...။ တစ်ရက်ကလည်း ပရောဂျက်အသေးစားလေးတစ်ခုကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့လုပ်ရပါတယ်..စလုံးတရုတ်ပါ။ အဲဒီတစ်ယောက်ကလည်း အတန်းမှာ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့မို့ သူနဲ့လုပ်ရမှာခပ်လန့်လန့်ဘဲ...။ ဆရာလာပေးတဲ့ ပရောဂျက်ကြည့်တော့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ပရောဂျက်မို့ တော်သေးတယ်ပြောရမယ်...။ နောက်ဆုံးတော့လည်း တစ်ယောက်တည်းလုပ်ရင်းနဲ့ပဲ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးသွားပါတယ်..။ ပါတနာကို မေးကြည့်တော့ဘာမှမသိဘူးဆိုတာနဲ့ ဘေးမှာဘာမှကိုမခိုင်းတော့ဘဲ ထိုင်ဘဲကြည့်ခိုင်းထားတယ်..။ ကိုယ်ကလုပ် သူကဘေးကနေစကားလေးပြောပေးနဲ့ အဆင်ကိုပြေနေတာဘဲ..မပျင်းရတော့ဘူးပေါ့..။ တော်သေးတယ်.. မြန်မာပြန်ကလာမှန်းတော့ သူသိပေလို့...။ တစ်ခါမှစကားမပြောဖူးပေမဲ့ အဲဒီနေ့ကတော့ သူနဲ့ စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်ခဲ့တယ်..။ မြန်မာပြည်ဘယ်မှာမှန်းမသိလို့ မနည်းရှင်းပြရသေးတယ်... ထိုင်းနဲ့ ဘယ်လိုစပ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ့..။ Bangkok ဆိုတာ capital လားလို့လာမေးတော့ နည်းနည်းတော့လေချင်သွားတယ်.. ဒီတစ်ယောက်တော့နည်းနည်းတော့မှားနေပြီထင်တယ်..။ ဘာအတွက်နာမည်ကြီးလည်းမေးတော့.. ဘာပြန်ဖြေရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး...စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ဘဲ နောက်ဆုံးမှာ Pigeon Blood Ruby တွေပေါတယ်လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ရတယ်.. လေပါတယ်..။ အံမယ်..နိုင်ငံရေးအကြောင်းလာမေးလိုက်သေးတယ်... Military Government လို့ဘဲခပ်ကျယ်ကျယ်ဖြေလိုက်တော့ မျက်လုံးပြူးပြပြီး.. ပါးစပ်ပိတ်သွားတယ်..။ အေးရော.........။
စိတ်တွေသာဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်နေတာ... ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကျတော့ အာရုံတွေက သံလိုက်နဲ့ဆွဲလိုက်သလို အလိုလိုစုသွားရော.. =D။ သရဲကားကြည့်ဖြစ်တယ်.. ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်.. လူသေတွေကိုခွဲစိတ်တဲ့ လူကသင်္ချိုင်းကအလောင်းတွေပြန်ဖော်ပြီး ၀ိညာဉ်ပြန်သွင်းတာ ပြီးတော့မှ အဲဒီလူတွေမသေခင် အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်မှာသိမ်းသလဲဆိုတာပြန်မေးပြီး သူကယူမှာလေ...။ နောက်ဆုံးသရဲတွေက အိမ်မှာစွဲနေတာ..အိမ်မှာလာငှားနေတဲ့မိသားစု ဒုက္ခရောက်တာပေါ့.....တွေးရင်းနဲ့ လန့်ပါတယ်..။ ဟာသကားလည်းကြည့်သေးတယ်... ရီရတယ်.. ဟာသကားတွေကြည့်ရတာ ဘဲကောင်းတယ်.. Romance လေးနဲ့ Comedy ပေါင်းထားတာမျိုးပေါ့..။ ရုံမှာ Transformers2သွားကြည့်ဖြစ်တယ်... မဆိုးဘူး.. effect တွေကောင်းလာတယ်.. စက်ရုပ်ကြီးတွေလည်းမိုက်တယ်... မင်းသမီးလေးလည်းချောပါတယ်.. ;D။ ကြာသပတေးနေ့ Harry Potter and the Half-blood Prince တင်မယ်....။ စာအုပ်ဖတ်ပြီးသားပေမယ့် .. အဲဒီနေ့ အတန်းပြီးတာနဲ့ အပြေးသွားကြည့် အုန်းမှာဗျာ..။
သီချင်းတော့ အတော်နားထောင်ဖြစ်တယ်...။ စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်.. တစ်ယောက်တည်းနေချင်တာများနေတယ်...။ နားထောင်ဖြစ်တဲ့သိချင်းတွေကလည်း If today was your last day ၊ Heartless ၊ Better in time ၊ I can't make you love me ၊ Ain't no sunshine ၊ Bleeding Love အဲသလိုသီချင်းမျိုးတွေဘဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်..ကူညီကြပါ...။ လောလောဆယ်နားထောင်ဖြစ်နေတာကတော့ When I think of you (Chris Deburgh) နဲ့ Heartless (Kris Allen) ... when i think of you ကသီချင်းချိုချိုအေးအေးလေး.. သီချင်းစကတည်းက ကြိုက်သွားစေတဲ့သီချင်းမျိုး...။ Heartless ကိုတော့ Kanye West ဆိုတာထက် Kris Allen ဆိုတာပိုပိုသဘောကျနေတယ်... နားကြပ်လေးတပ်ပြီး သီချင်းလေးလိုက်ညဉ်းလိုက်ရရင်ကို ခံစားမှုဘဲ...။
ပို့တော့ မကြာမကြာဆိုသလို ရေးရင်ရေးဖြစ်သလိုလေးတင်သွားပါမယ်..။ အချိန်ပေးလာလည်နှုတ်ဆက်သွားသူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ အားလုံးကို သတိရပါတယ်..။
Posted by Phyo Evergreen at 7:04 PM5comments Links to this post
Fast Food အန္တရာယ်
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး... ဘလော့လောကနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်မှာစိုးလို့ ပို့တစ်ပုဒ်လောက်တင်လိုက်တာ..။ အသိပေးချင်လွန်းတာကြောင့်လဲပါပါတယ်..။ ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိ မှန်သည်ရှိ မမှန်သည်ရှိ.. အောက်က video ကို မဖြစ်မနေကြည့်ပါ...( Fast food မကြာခဏစားသူများ.. ကြိုက်လွန်းလို့ပါဆိုသူများ..ကြည့်ဖြစ်အောင်ကို ကြည့်ပါ)။
ပျောက်နေရခြင်း အကြောင်းက ဒီရက်ပိုင်း စာမေးပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြေနေလို့ပါ..။ စာလား...ကျက်ဖြစ်ပါတယ်... ၁၀ မိနစ်ခြားတစ်ခါလောက် Facebook ကို မိနစ် ၂၀ လောက်ရောက်ရောက်သွားတာကလွဲလို့ပေါ့..ဟီးဟီး..။ အားလုံးကို သတိရပါတယ်... ဘလော့တွေလည်း တော်တော်များများရောက်တယ်..။ လာလည်သူ စာလာဖတ်သူများ..အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ..။
ရိုက်သာရိုက်ရတယ်. ခပ်လန့်လန့်ရယ်.. မတော်လို့ အကောင်က တုပ်ထည့်လိုက်ရင် ဒုက္ခ
Posted by Phyo Evergreen at 11:16 PM5comments Links to this post